Uvalo lokudilizwa lwamnika isibindi
UNKK Bongi Ndaba ekhanda omunye wosofa endaweni asebenzela kuwo eseNewlands Isithombe: Sithunyelwe
Phili Mjoli | October 23, 2020
UKUDILIZWA kozakwabo kumnike isibindi sokuthi azesulele emsebenzini ayozisebenza, okuyinto abesaba ukuyenza ngesikhathi kusahamba kahle emsebenzini.
UNkk Bongi Ndaba waseNewlands West, ongumnikazi weMvemveshane Holdings elungisa osofa, uthe ukudilizwa kozakwabo nokushintsha kwendlela yokusebenza ngenxa yokushoda komsebenzi, kwamenza wathatha isinqumo sokuthi ayeke ukusebenza.
UNkk Ndaba owayesebenza kwaGrafton Everest, uthe ngaphambi kokushiya emsebenzini ubevele esenalo ibhizinisi lakhe elincane lokukhanda osofa futhi ethunga namakhushini.
“Ngangenzela ukuthi ngizitholele imali engeziwe ngingahlosile ukuthi ngibe nebhizinisi. Ngo-2010 izinto zashintsha emsebenzini satshelwa ukuthi kuzokwehliswa isibalo sabasebenzi ngoba umsebenzi usumncane.
“Badilizwa abanye mina ngasala kodwa ngazithathela isinqumo sokuthi nami ngizoyeka ukusebenza ukuze ngizame inhlanhla ebhizinisini lami lokukhanda osofa. Lokho ngangikwenziswa ukuthi kwakungasemnandi emsebenzini sesihlala sithukile, ngabona kungcono ukuthi ngizame inhlanhla ngoba bese nginawo amakhasimende,” kusho yena.
Uthe waqala wasebenzela egaraji elisekhaya, ukwanda kwamakhasimende kwamphoqa ukuthi athole indawo enkulu ngoba igaraji lakwakhe bese lilincane engasakwazi ukugcina osofa abaningi kulo.
“Ngesikhathi ngiqala ukuzisebenza bengizenzela konke ngibaqaqa osofa, ngibalungise okonakele ngiphinde ngiwukhave mina. Umyeni wami nezingane zami bebengilekelela uma bekhona kodwa ukwanda komsebenzi kwangiphoqa ukuthi ngibe nabantu engibaqashile, abazobhekana ngqo nomsebenzi ukuze kusheshe,” kusho yena.
Uthe usofa ukwazi ukuwuqala phansi uma ikhasimende kade linosofa bendwangu selifuna ukuwushintsha, uyakwazi ukuwushintsha awenze ube yisikhumba.
Uthe nakuba ebe nenhlanhla yokuthi ibhizinisi lakhe lisheshe lichume kodwa usenazo izingqinamba ngabasebenzi.
“Ukusebenza nabantu kunzima, kuke kuthi sengihlelile ukuthi umsebenzi othile uyahamba ngakusasa ngoba sengibonile ukuthi sekusele kancane uphele, umsebenzi avele alove emsebenzini. Uma kade engasebenzi ngayizolo angabiki ukuthi kukhona okumbambile. Leyo nto iyangilimaza ngoba mina ngisuke sengihlelile ukuthi ungakanani umsebenzi okumele uhambe,” kusho yena.
UNkk Ndaba uthe wafundela iFashion Design ngoba engakwazanga ukuqeda u-matric.
“Ngangigula ngisemncane, ngesikhathi okwakumele ngabe ngibhala izivivinyo ngangisesibhedlela. Ngonyaka olandelayo ngawuphinda uma sekusondele ukuthi kubhalwe izivivinyo ngagula futhi, mhlawumbe ngiyiswe enyangeni noma esangomeni, ngigcine ngingabhalanga. Ngabona ukuthi isikole asingivumi kungcono ngenze umsebenzi wezandla ukuze ngikwazi ukuziphilisa. Ngafundela iFashion Design, angizange ngizithunge izingubo ngathola umsebenzi eGrafton Everest ngawuthanda umsebenzi wokwakha osofa,” kusho yena.
‘Ngiyaqala futhi ngiyagcina ukungenela amaCrown’
Kuhlehliswe umngcwabo kaNgcongca
Kungakuhle uma Igcokama lingelula isandla kwabaswele
Bacikwe yinkulumo kangqongqoshe
Akazisoli ngokulandela iphupho lakhe owashiya umsebenzi